सिम्रक एयरको अफर
निजी क्षेत्रको हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी सिम्रिक एयरले गोसाइकुन्ड दर्शन गर्न यात्रुका लागि सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । कम्पनीले फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म यात्रा गर्न चाहने यात्रुका लागि प्याकेज अफरमा सेवा प्रदान गर्न लागेको जनाएको छ ।
पटिहानीमा नयाँ गन्तव्य
भरतपुर–२२ मा पर्यटकीय गन्तव्य थप भएको छ । भ्रमण वर्ष–२०२० का लागि १ सय गन्तव्य सूचीमा परेको पटिहानी क्षेत्रमा ‘अम्ब्रेला स्ट्रिट’ बनाइएको छ । ३ करोड लागतमा बनाइएको अम्ब्रेला स्ट्रिटको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिहीबार उद्घाटन गरे ।
जनजाति साँस्कृतिक एवं पर्यटन महोत्सव हुने
लमजुङमा फागुनको अन्तिम साता दोस्रो जनजाति साँस्कृतिक एवं पर्यटन महोत्सव हुने भएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद्, लमजुङले जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको बेंसीसहर नगरपालिका–९, दनाईफाँटमा महोत्सव गर्न लागेको हो । आयोजकले बुधबार सदरमुकाम बेंसीसहरमा पत्रकार सम्मेलन गरी महोत्सवबारे जानकारी गराएको हो ।
वुहानका नेपाली लिन शनिबार जाँदै
चीनको हुवेइ प्रान्तस्थित वुहान सहरमा रहेका १८० नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काउन राष्ट्रिय ध्वाजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज शनिवार चीनतर्फ जाने भएको छ । सरकारले हुवेई प्रान्तबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइडबडी ए–३३० जहाजमार्फत स्वदेश ल्याउने भएको हो ।
भिस्तारको दिल्ली–काठमाडौं उडान सुरु
भारतको हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी भिस्तारा एयरलाइन्सले नयाँ दिल्ली–काठमाडौं उडान सुरु गरेको छ । योसँगै काठमाडौं उडान भर्ने विदेशी एयरलाइन्स कम्पनी एक थपिएको छ । भारतको टाटा समूह र सिंगापुर एयरलाइन्सको संयुक्त लगानीमा उडान भर्दै आएको भिस्ताराले ५ औं अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको रूपमा व्यावसायिक रूपमा काठमाडौं उडान सुरु गरेको हो ।
डोटी विमानस्थल कालोपत्रे
डोटी विमानस्थल कालोपत्रे गर्ने सम्पन्न भएको छ । निर्धारित समयभन्दा झन्डै एक वर्षपछि निर्माण सम्पन्न हुन लागेको डोटी विमान स्थल कालोपत्रे गर्ने काम अहिले आएर सम्पन्न हुन लागेको हो । विमान स्थलको पार्किङ स्थल, रनवेबाहेक विमान स्थल भरानगर्ने काम भई सकेको छ भने नाली निर्माण र तारवार लगाउने काम पनि सम्पन्न गरिसकेको छ ।
‘भिजिट मधेस–२०२० एन्ड बियोन्ड’ को उद्घोष कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौंस्थित रिपोर्टर्स क्लब नेपालबाट गत पुस २२ गते घोषणा गरिएको ‘भिजिट मधेस–२०२० एन्ड बियोन्ड’ को उद्घोष तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम तराई–मधेसका २२ वटै जिल्लामा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । उक्त अभियानका राष्ट्रिय संयोजक ओमप्रकाश सर्राफले दिएको जानकारीअनुसार आफूहरूले घोषणा गरेको उद्घोष तथा सरोकारवालाहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हो । उनकाअनुसार उक्त कार्यक्रम पूर्वको झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म आयोजना गरिएको थियो ।
फागुन १९बाट नारितामा सीधा उडान
नेपाल वायुसेवा निगमले फागुन १९ देखि जापानको नारितामा उडान गर्ने भएको छ ।साताको तीन उडान गर्ने गरी निगमले समयतालिका तयार पारेकोे जनाएको छ ।
भ्रमण वर्षको पहिलो महिनामै घटे पर्यटक
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पहिलो महिना जनवरीमा नै नेपाल आउने पर्यटकको संख्या घटेको छ ।
समुद्र सतहदेखि तीन हजार ४०० मिटरको उचाइमा रहेको पहाडको टुप्पोमा धार्मिक पर्यटकीयस्थल मालिका धुरी छ । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७ र रघुगंगा गाउँपालिका–६ को सीमा क्षेत्रमा अवस्थित मालिका धुरीमा चण्डी पूर्णिमा, जेष्ठी पूर्णिमा र कार्तिक पूर्णिमामा दर्शन र पूजाआजा गर्ने भक्तजनहरुको घुइँचो लाग्छ ।
हात्ती सफारीमा रमाउँदै पर्यटक
नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० मा लिइएको लक्ष्य पूरा गर्न सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–३ कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालयको छेउमा आयोजना गरिएको कोशी पर्यटन महोत्सवमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले हात्ती सफारी र बोटिङको आनन्द लिइरहेका छन् । महोत्सवमा दैनिक रुपमा हात्ती सफारी र बोटिङ गर्नका लागि एक हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेका बताइएको छ । गाउँपालिकाले ५० हजारदेखि एक लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ आयोजना गरेको सो महोत्सवले उल्लेख्य मात्रामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सफल भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयुव अंसारीले बताए ।
पहाडकी रानी घान्द्रुक
माघे संक्रान्तिको मिर्मिरे बिहानी थियो । अघिल्लो दिनको यात्राले होला, निकै थकित थियौं । आँखाको ढकनी खुल्यो तर शरीर उठाउन असजिलो बन्यो । एक्कासि बाहिरको आवाज आयो, ए ! हिमाल ! उठ क्या....।
कोटबाडा विमानस्थल परीक्षण उडानमै सीमित
विसं २०४२ बाट निर्माण कार्य थालिएको कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–१ स्थित कोटबाडा विमानस्थल परीक्षण उडानमा मात्रै सीमित भएको छ । विसं २०७३ माघ २९ गते परीक्षण उडान भएको कोटबाडा विमानस्थलमा अहिलेसम्म नियमित उडान हुन सकेको छैन । तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको कार्यकालमा परीक्षण उडान गरिएको कोटबाडा विमानस्थल कसैले चासो नदिँदा परीक्षण उडानमै सीमित भएको हो ।
मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने
दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । कञ्चनपुर पुगेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईसहित प्राविधिक टोलीले विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने बताएका हो । विमान स्थल सञ्चालन गर्नका लागि दुई बिघा जग्गा आवश्वक रहेकोले अधिकरण गर्नुपर्ने प्राविधिक टोलीको निस्कर्ष छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईसहित प्राविधिक टोलीले शनिबार मझगाउँ विमान स्थलको अवलोकन गरेका छन् ।
धनगढी विमानस्थलमा २० वर्षे गुरुयोजना
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले धनगढी विमानस्थललाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले धनगढी विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन २० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मन्त्रालयले शनिबार धनगढीमा २० वर्षे गुरुयोजना सार्वजनिक गर्दै १२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको लागतमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाइने जनाएको छ ।